Uselọ ọrụ Blouse | Ndị na-emepụta uwe elu akwa, ndị na-eweta ngwaahịa
OEM / ODM Women Batwing Sleeve Turn Down Collar Front Button Blouse Stripe Poplin Blouse Ladies 'Blouses N'ihi Oge
Loose mkpụmkpụ aka uwe, lapel na n'ihu button imewe, poplin ákwà na-enye ume ọhụrụ na ala. Uwe a na-acha anụnụ anụnụ na-ewu ewu ma na-ewu ewu kwa ụbọchị.
Ejiji na Mara mma Womens Allover ebipụta Wepụta olu akwa Front Button uwe elu nwanyị Bịa Long uwe Designer uwe elu nwanyị
Uwe a na-acha V-neck na-adabaghị na nke nwanyị niile mara mma, na-agbakwunye uwe elu ahụ. Loose rụrụ, dị mma iji eyi, ezigbo maka ejiji kwa ụbọchị.
BL80031 New design N'ogbe ladies mgbochi pilling jụụ n'elu elu uwe elu nwanyị chiffon uwe elu maka ụmụ nwanyị na nwanyị blouse nkịtị Spring summer uwe elu nwanyị
Womens chiffon uwe elu nwanyị nwere lapel na bọtịnụ n'ihu. Uwe chiffon dị mma iji eyi n'oge ụbọchị ọkụ. Ọ bụ ìhè na iku ume. Enwere ike ịgbanye ogologo aka uwe iji kwekọọ n'ụdị dị iche iche. Okwesiri ighota ya na akwa jeans ma obu uwe ogologo ọkpa iji tinye uche nke ejiji.
Style: mara mma
Typedị mode: nkịtị
Ogologo: mgbe nile
:Dị: uwe elu
Nkọwa: bọtịnụ n'ihu
Aka ogologo: aka uwe ogologo
Oge: mmiri / mgbụsị akwụkwọ
Mejupụtara: 100% polyester fiber
BL80006 N'ogbe puls size halter ladies n'elu uwe na-enweghị aka chiffon uwe elu nwanyị maka oge ọkọchị
Sexy na-enweghị aka, na-egbochi olu olu, na-eme ka ị maa mma karịa. Na-eweta mmetụta dị jụụ ma dị mma n'oge ọkọchị. Ọ dị mfe iji kwekọọ ma dị mma iji eyi. Ọ dabara adaba maka ihu igwe na-ekpo ọkụ, ị nwere ike iyi ya n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ịga ahịa. Gosi ụdị mma gị.
:Dị: Sleeveless Chiffon Shirt
Gender: Women'smụ nwanyị
Size Type: gulargachi
Nlekọta Uwe: Aka-Asacha
Olu akwa: Akwa olu akwa
Style: Ejiji, Sexy
Oge: Oge ọkọchị
Oge: Uwe Daily, ppingzụ ahịa, Oriri, Dance, Club, Pub, Holiday, Beach
Atụmatụ: Obi iru ala, Agba siri ike, ọkara, Nkịtị
BL80118 ahaziri ụmụ nwanyị 2021 mara mma ogologo aka dobby chiffon elu uwe elu nwanyị
Nke a rụrụ elu bụ nke dị nro na nro chiffon. Obere ohiri isi ndị dị na uwe na-egosi ụdị ọdịdị dị egwu, nke kachasị ewu ewu n'oge a. A na-eji eriri nwere ike chọọ eriri olu ahụ, nke enwere ike kekọta ya n'ọtụtụ ụzọ. Ejiri jaketị kpoo jaket ahụ. Nwanyị nwanyị a na ejiji mara mma ga-adaba na uwe mwụda dị ogologo na ogologo ọkpa.
Anyị nwere olile anya na afọ juru gị na ngwaahịa anyị! Maka ihe kacha mma, biko rụtụ aka na tebụl anyị zuru ezu.
Nkọwa: Frill, Button Front
Neckline: Kee olu
Aka Ogologo: Ogologo Uwe
Oge: Oge opupu / Uda
Mejupụtara: 100% Polyester
BL870003 2021 agụ owuru ụmụ nwanyị na-ebipụta bọtịnụ lapel
Uche nke uwe elu a bụ ihe a ma ama na ejiji, ụdị bọtịnụ V-neck na ụdị adịghị mma, dị mma iji eyi. Ọmarịcha mbipụta na-agbakwunye uwe elu nke uwe okomoko, na-eme ka uwe elu ahụ mara mma karịa, na-eweta amara mara mma, ma na-enye gị mmụọ ọzọ. Nke a n'elu na-aghọ nhọrọ zuru oke maka uwe kwa ụbọchị. Enwere ike ijikọta ya na jeans, leggings ma ọ bụ obere.
Akụkụ ndị bụ isi gụnyere:
-Ndị mgbe nile aka uwe
-Nimmụ anụmanụ, zuru-e biri ebi
BL88004 ejiji ejiji mara mma satin kacha elu ụmụ nwanyị na-ama uwe ogologo satin uwe elu
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị Typedị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Typedị Longdị Ogologo: Olu akwa siri ike: Ogologo Olu akwa Aka (cm): Dechọ Mma zuru ezu: ...
Uwe nwanyi BL88003 ụmụ nwanyị OFFICE BLOUSE ụmụ nwanyị nwere klasị nwanyị mara mma ogologo aka uwe
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị Productdị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Redị gulardị gulargha: :dị Olu siri ike: Guzo Aka Sleeve (cm): Mma Dechọ Mma: ...
BL830034 ụlọ ọrụ ọnụ ala dị ọnụ ala gbakwunyere ogo chiffon patchwork agba agba ụmụ nwanyị na-ama ọkwa ụlọ ọrụ na uwe elu nwanyị maka ụmụ nwanyị
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị Typedị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Redị gulardị :gha: Pdị Olu akwa: Mgbatị Ogologo Uwe Ochie (cm): Ihe ndozi zuru ezu ...
BL830004 dị ọnụ ala dị na ngwaahịa ụmụ nwanyị 'agụ owuru uwe elu & n'elu ogologo aka tinyere nha chiffon nkịtị uwe elu nwanyị maka ejiji
Isi Nkọwa Nkọwa Otu Afọ: Okenye Nwoke: Productdị Productmụ nwanyị Productdị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Redị gulardị :dị: Akpịrị Akpịrị: Ogologo Uwe Aka Akpa (cm): Decorat zuru ezu ...
BL830033 gbakwunyere oke nwanyị na-ebi akwụkwọ ifuru n'elu akwa uwe chiffon nwere ike ịgbanye olu obere aka uwe ụmụ nwanyị na elu
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị Productdị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Redị gulardị :gha: Coldị Ifuru: Wụghari Ogologo Uwe Ochie (cm): Short Decorat ...
BL830032 European ejiji floral flori na-ebi akwụkwọ ụmụ nwanyị ogologo uwe chiffon uwe elu akwa v olu ụmụ nwanyị 'uwe elu nwanyị & n'elu
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị :dị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Redị gulardị :dị: Coldị Ifuru: Wụghari Ogologo Aka Uwe (cm): Full Decorati ...